Madaxweyne Lafta-gareen Oo Ka Qeyb Galay Kulan Dood Wadaag – Radio Baidoa
Madaxweyne Lafta-gareen Oo Ka Qeyb Galay Kulan Dood Wadaag
By Webmaster	 On Mar 7, 2020
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen ) ayaa kulan xog wareysi iyo wadatashi ah la yeeshay masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga Dib U Eegista Dastuurka ee Madaxa Bannaan dalka ee laba aqal Baarlamaanka somaliya kuwaas oo uga warbixiyey halka ay marayaan hawlaha dhammeystirka Dastuurka iyo arrimaha hortabinta u leh.
Wasiirka ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo xubnaha labada Guddi ayaa Madaxweynaha la wadaagay warbixinno ku aaddan hawlaha qabsoomay muddadii ay shaqaynayeen.
Madaxweyne Lafta-gareen oo shir guddoominyey kulankan ayaa markii uu dhegaystay warbixinnada waxa uu sheegay in mamamulkiisa mudnaanta kowaad siinayso sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka iyada oo xoogga la saarayo xasiloonida iyo wadashaqaynta siyaasadeed ee ka dhexaysa laammaha dowladda.
“Waxaan aaminsanahay inaad geeddiga soo gaarsiiseen meel fiican oo la dhammaystiri karo. Waxa arrintan qayb ka qaatay xasiloonida siyaasadeed ee aan haysanno oo aan aaminsanahay haddii aysan jiri lahayn inay hawsha aad haysaan intan ka sii adkaan lahayn. Waxa loo baahan yahay in xasiloonidaas la gaarsiiyo Dowlad Goboleedyada kale ee dalka.”
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed ayaa sidoo kale bogaadiyey shaqada ay qabteen Wasaaradda iyo Guddiga Dib U Eegista Dastuurka kuwaasi oo ku shaqeeyay duruufo adag isaga oo ku boorriyey in la dardargeliyo dadaallada haatan socda.
Shirka waxa ka qaybgalay Wasiir ku xigeenka wasaarada Dastuurka xukumadasomaliya xuseen cabdi ,gadoomiyah barlamanka konfur galbed cabdulqadir shariif sheekhuna,Sanatar xussen Xog hayaha gudiga Dib u Eegista Dastuurka laba aqal iyo odayasha dhaqanka konfur galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada mamulka .
Xukun dil ah oo lagu riday Askari Askari kale dilay
Muwaaddin Gurigisa laga heystay 30 Sano oo manta lagu wareejiyay